ရွက်လွှင့်သွားသော ပလွေသံအက်ကြောင်းများ | ZAYYA
← Some Mathematics Notes and PDF files
Insider Attack and Cyber Security ;) →
ရာသီတစ်ရာသီ ကုန်ပါပြီ။ ကျနော် အိမ်က ထွက်လာ ခဲ့သည်က သုံးလတော့ ပြည့်ပြီ။ အဖေ၊ အမေ၊ ညီ၊ ညီမနဲ့ ကျနော့်ကိုမှ ခင်တွယ် စောင့်မျှော်နေတတ်တဲ့ အိမ်မွေး ခွေးမလေး ဆန်းမီကို လွမ်းသည်။ ဘယ်တော့ ပြန်တွေ့ ကြပါ့မလဲ။ တွေ့ကော တွေ့ဖြစ်ကြ ဦးမလား …………လွမ်းမောစိတ်ဖြင့် ပူလောင်ရင်း……
ငါ့သမီးလေး အခု ဘယ်မှာ ?
သူ့မျက်ဝန်းဝိုင်းဝိုင်းလေး ဘယ်မှာ ?
စူးရှရှ တေးသွား ကြားက တိုးထွက်ပြီး
ဘာအဖြစ်မှ မရှိခဲ့တဲ့ ငါ ပြန်မြင်နိုင်ပါဦးမလား..
ငါ ဒီလိုတိမ်တွေ ဖြစ်လိုက်ချင်တယ်။
ခြောက်ကပ်မြဲ ခြောက်ကပ်နေဆဲ အနာဂတ်များဆီသို့ သည်ဂီတများဖြင့်